GALLERY: Zimbabweans march against Mugabe | News24
Africa > Zimbabwe > GALLERY: Zimbabweans march against Mugabe
A woman cheers on a soldier as hundreds gather in Bulawayo, Zimbabwe, Saturday, Nov. 18, 2017 to demand the departure of President Robert Mugabe after nearly four decades in power. (AP Photo?Tawanda Mudimu)
People carry placards during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
Women wave Zimbabwe's national flag during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
A woman reacts as people march with an armored personnel carrier during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
People gesture and shout slogans during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
A man takes part in a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president with a sign featuring deputy president Emmerson Mnangagwa in the windshield of his car on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
A person holds a sign featuring Commander of the Zimbabwe Defence Forces, Constantino Chiwenga as people take part in a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
A man carries a placard of Zimbabwe former deputy president Emmerson Mnangagwa during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
People cheer a passing Zimbabwe Defense Force military vehicle during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
People shout slogans during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
This photo taken on November 18, 2017 in Harare shows a newspaper headline during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
People cheer the arrival of Zimbabwean soldiers during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
A woman reacts during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
A man carries a placard as a demonstration marches towards the Zimbabwean State House while calling for the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
People march alongside a Zimbabwean armoured personnel carrier as a demonstration marches towards the Zimbabwean State House while calling for the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
People dance during a demonstration marching towards the Zimbabwean State House while calling for the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
People react during a demonstration marching towards the Zimbabwean State House while calling for the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / -
People shout slogans and wave Zimbabwean national flags during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe's president on November 18, 2017 in Harare. Zimbabwe was set for more political turmoil November 18 with protests planned as veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for President Robert Mugabe to be forced from office. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA